My Thoughts My Blog: 2009
တမြန်နေ့က တွေ့ခဲ့တဲ့ ချစ်သူရေ
ငါတို့ဟာ ပုစ္စုပန်မှာပဲ ပျော်သူတွေ
ရေခဲနဲ့ ရေသန့်လောက် မပြောဖြစ်ဘူး
ကျန်တာတွေ အလိုလို လတ်ဆက်လာမှာပေါ့....
လှိုင်း လှိုင်း လှိုင်း လှိုင်း.....။ ။
၁၂ နာရီ ၅၂ မိနစ်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 12:21 AM
ဒီနေ့ မြေနီကုန်းဘက်ရောက်တာ နဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်ကြည့်ဖြစ်ရင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်လာတယ်။ သုံးပွင့်ညီညာစာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ တင်ဦးခက်(နိုင်ဦး) ရဲ့ ဧဒင်ကိုစွန့်ခွာပြီးနောက် ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ စာအုပ်က တွေးခေါ်ဆင်ခြင်သောအလုပ်ကို နှစ်ခြိုက်ခုံမင်သူများအတွက် အကူအညီအထောက်အပံ့များစွာ ရရှိပြီး သဘောကျမဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဝေသူအဖွဲ့က ပြောထားတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာများကလည်း ကောင်းမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တယ်။ မာတိကာ အညွှန်းလေးနဲ့ ညွှန်းပေးထားမယ်။
စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် - ၄၀၁၀၆၅၀၆၀၈
မျက်နှာဖုံးခွင့်ပြုချက်အမှတ် - ၄၀၀၉၄၀၀၆၀၉
စီစဉ်သူ - သုံးပွင့်ညီညာစာပေ
ထုတ်ဝေသည့်အကြိမ် - ပထမအကြိမ်
ထုတ်ဝေသည့်ကာလ - ဇန်န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်
ကွန်ပျုတာစာစီ - သုံးပွင့်ညီညာ၊ ရွှေပြည်တန်
မျက်နှာဖုံးပန်းချီ - မောင်နေကြည်
မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း - သန့်ဇင်ထွန်း
အဖုံးဖလင် - EMPIRE
အတွင်းဖလင် - အေဇက်
စာအုပ်ချုပ် - ဖူးပွင့်မွှေး
အတွင်းပုံနှိပ်နှင့် - ဒေါ်ခင်အေးမြင့် ( ၀၅၉၀၁)
မျက်နှာဖုံးပုံနှိပ် - ရာပြည့်ပုံနှိပ်တိုက်
တိုက်ခွဲ ၁၉၉၊ လမ်း ၅၀၊
ထုတ်ဝေသူ - ဦးတင်ကိုဦး
ရွှေရည်မြင့်မြတ်စာပေ ယာယီ (၁၀၇၃)
အမှတ် ၅၈၀/ ခ၊ အောင်ရတနာလမ်း။
တန်ဖိုး - ၁၈၀၀ ကျပ်
- စာရေးသူ၏ အတ္တုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
- သုံးပွင့်ညီညာစာပေ၏ အမှာ
- အလက်ဇန်းဒရီးယား၊ဘက္ကဒက်၊ ကိုင်ရို
- သိပ္ပံဒဿန သမားတွေ
1. FMI (MD), Tales of Philosophy.
2. Will Durant, Story of Philosophy
3. Dana Lee Thomas, Living Biography of Great Philosophers.
4. Bertand Russell, A History of Philosophy
5. D.D Runes, Dictionary of Philosophy
6. Nietzche, Thus Spoke Zarathusra
7. BerLin, The Age of Enlightenment
8. Hampshire, The Age of Reason.
9. White M, The Age of Analysis.
10. ဒေါ်ခင်ဆက်ရီ (ကထိက) , အနောက်တိုင်းဒဿနပညာ အတွဲ (၂)
11 မောင်ကြည်သစ်,ငြင်းပယ်ခြင်းအလှ ( ၁၉၉၆ )
12 မောင်ကြည်သစ်, ဒဿနဂန္တ၀င် ( ၂၀၀၀ )
13 စာပေဗိမာန်, စာတမ်းငယ်စာပေစာတမ်းများ (ပ)တွဲ
စာအုပ်ဖတ်ပြီးသူများကို မရည်ရွယ်သောလည် မဖတ်ရသေးသော ဖတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက် အမြည်းသဘောပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၈နာရီ ၃၅ မိနစ်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 7:11 PM
၁၇.၁၀.၂၀၀၉ စနေနေ့မနက် ၅ နာရီခွဲ…
နှိုးစက်ကြောင့် နိုးလာခြင်း မဟုတ်ပဲ အစောကြီးကတည်းကနိုးနေပြီး နှိုးစက်မြည်မှထမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့် နှိုးစက်မြည်သောအခါ ထလိုက်သည်။ မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီး လိုအပ်တာများပြင်ဆင်ပြီး ထွက်လာတော့ ၆ နာရီထိုး နေပြီ။ အင်းစိန်ဘက်တွင်နေသော ခရီးစဉ်တွင်လိုက်မည့် သူငယ်ချင်းအားသွားခေါ်လိုက်သည်။ သူတို့အား အင်းစိန်ဈေးရှေ့တွင် စောင့်နေစဉ် အနီးအနား ကျောင်းတိုက်များမှ ဖြစ်ဟန်တူသော ရဟန်းသံဃာကိုရင် အပါး ၆၀ ၏ ညီညီညာညာ ဆွမ်းခံထွက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ရ၍ စိတ်တွင် အေးချမ်းမှုနှင့် ကြည်နှုးမှုဖြစ်ရသည်။ ကိုယ်ကလည်း အလှူအတန်းသွားလုပ်မည့် ခရီးသွားဖို့ ထွက်လာသည်ဆိုတော့ မင်္ဂလာကျက်သရေရှိမြင်ကွင်းမျိုး မြင်ရသည်မှာ စိတ်ချမ်းသာလှပါသည်။
၇ နာရီတွင် ချိန်းဆိုထားသော စာအုပ်ဆိုင်မှ စာအုပ်များကို ကားဖြင့်သယ်၍ ဇတ်ဆိပ်သို့ရောက်လာပါသည်။ ထို့နောက် ဒလမှ တွံတေးသို့ လိုင်းကားဖြင့် စာအုပ်များ တင်၍ ထွက်လာရာ မနက် ကိုးနာရီလောက်တွင် တွံတေးဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ပါသည်။ အသင့်စောင့်ကြိုနေသော အဂါးရွာမှစက်လှေသမားများ၊ ကျောင်းပညာရေးကော်မတီဥက္ကဌ နှင့် ဆရာမ တစ်ယောက်အား တွေ့ရပါသည်။ ထို့နောက် စာအုပ်များကို စက်လှေပေါ်သို့ရွှေ့ပြောင်းပြီး တွံ့တေးမှ အဂါးအုပ်စု အဂါးရွာဆီသို့ ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ လမ်းခရီးစဉ် တစ်လျှောက်လုံး ရာသီဥတု သာသာယာယာနှင့် စက်လှေလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါသည်။
ခရီးစဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် သုံးခေါက်မြောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ မအူပင်ခရိုင်၊ အဂါးအုပ်စုရှိကျေးရွာများမှ မူလတန်းကျောင်းများအား စာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာများကို စေတနာရှင်အလှူရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးဝေ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဂါးအုပ်စုတွင် ကျေးရွာငါးရွာရှိပါသည်။ ကျုံကြိုက်၊ အဂါး၊ စကားလွန်း၊ ညောင်ချောင်း နှင့် ဘိကလိုင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ အဂါးနှင့် ဘိကလိုင် ရွာ မူလတန်းကျောင်းများအား စာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ များလာရောက်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဂါးကို အရင်ဝင်သည်။ အဂါးကိုရောက်တော့ နေ့လည် ၁၁ ခွဲနေပြီ။ ထမင်းစားပြီးမှ အဂါးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်း ကျောင်းကို သွားပါသည်။ ကျောင်းကလေးမှာ မူလတန်းပညာသင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၁၇၀ ရှိပါသည်။ ကျောင်းသာ ၁၇၀ အား စာအုပ်တစ်ယောက် ၁ ဒါဇင်၊ ခဲတံ ၁ ချောင်း၊ ပေတံ ၁ ခု ၊ ခဲဖျက် ၁ တုံးစီပေးအပ်ပါသည်။ သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးများအား လေးကြောင်းမျဉ်းစာအုပ် ၄ အုပ်ထပ်ပေးပါသည်။ စတုတ္ထတန်းကျောင်းသားများအား ဘောပင်အပြာ တစ်ချောင်းစီပေးပါသည်။ ကျောင်းတွင် ဆရာ၊ဆရာမ အင်အား ၅ ယောက်ရှိရာ ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် ဘောပင်အနီများလည်း ပေးအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဆရာမများရပ်မိရပ်ဖများနှင့် နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီး အဂါးမှ စကားလွန်းရွာသို့ ထွက်လာပါသည်။
ကလေးငယ်များ စာအုပ်ယူရန် တန်းစီနေစဉ်
စကားလွန်းရွာမှ စာအုပ်များသွားရောက်လှူဒါန်းမည့် ဘိကလိုင်ရွာသို့ ခြေလျင်ခရီး ၁ မိုင်ခွဲ သာသာလောက် သွားရပါသည်။ ဘိကလိုင်ကျောင်းသို့ ရောက်သောအခါ အားလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော်လည်း မနားပဲ စာအုပ်များအား ခွဲတမ်းချ၍ တခါတည်းပေးဝေပါသည်။ ဘိကလိုင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၄၂ ယောက်ရှိပါသည်။ အဂါးမှာကဲ့သို့ စာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပြီး နောက် ဘိကလိုင်ရှိ အိမ်တအိမ်မှ ဒေသထွက် မုန့်ပဲသရေစာများဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါသည်။
ဘိကလိုင်မှ ဧည့်ခံသော ဒေသထွက်သီးနှံများ..း)
ဘိကလိုင်မှ ပြန်လာတော့ ညနေ ၄ နာရီထိုးနေပြီဖြစ်သည်။ ဘိကလိုင်နှင့် တွံတေး စက်လှေ ၂ နာရီခန့်စီးရပါမည်။ အမှန်မှာ ညအိပ်မည်ဟု ရည်မှန်းထားသော်လည်း အလုပ်ခွင့်ရက်အခက်အခဲကြောင့် ပင်ပန်းနေသည့်ကြားမှ နေ့ချင်းပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် စက်လှေစီးလာရာ အချိန် ၁ နာရီ သာသာခန့်လောက်တွင် စက်လှေ အင်ဂျင်မှ ထောက်ခနဲ့ မြည်၍ စက်လှေ ထိုးရပ်သွားပါသည်။ ဘာဖြစ်တာလို့ မေးလိုက်တော့ ချိန်းပြတ်၍ ရေထဲကျသွားသည်ဟုဖြေသည်။ အချိန်က ညနေ ၅ နာရီထိုးနေပြီဖြစ်သည်။ ခရီးက နောက်ထပ် ၁ နာရီစာကျန်သေးသည်။ သို့နှင့် အနီးဆုံး ကျုံလမု ဆိုသော ရွာလေးသို့ မျှော၍ လှေအားကပ်ထားပြီး ထိုရွာမှ လှေတစ်စီးအား အကူအညီတောင်း၍ နီးစပ်ရာ တွင်ခုံရှိသောရွာသို့သွား၍ ချိန်းအသစ်လုပ်ရပါသည်။ ဘိကလိုင်ရွာမှသူများကတော့ အကယ်၍စက်လှေဖြင့် အဆင်မပြေတော့ပါက ရှေ့တစ်ရွာတွင် တွံတေးထိ ဆိုင်ကယ်လမ်းပေါက်၍ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်နိုင်ကြောင်း အကြံပြုပါသည်။ သို့သော် ၁နာရီ အတွင်း ပြင်ဆင်ပြီး၍ ကျူံလမု မှ ထွက်လာတော့ ၆ နာရီ ဖြစ်နေသည်။ နေကလည်း အစောကြီးဝင်သဖြင့် အမှောင်ထုက ခပ်မြန်မြန်ရောက်လာသည်။ မှောင်မှောင်မဲမဲ ရိုးလေးထဲမှ တွံတေးသို့ ပြန်လာရာ ည ၇ နာရီကျော်မှ ရောက်ပါသည်။
တွံတေးရောက်၍ လိုင်းကားများ မရှိတော့သောအခါ ဒလဘက်ကမ်းထိ တက္ကစီငှားရပါသည်။ ဤသို့ အဆင့်ဆင့်ပြန်ခဲ့ရာ အိမ်ရောက်တော့ ည ကိုးနာရီခွဲဖြစ်နေသည်။ လူအနည်းငယ် ပင်ပန်းသော်လည်း ဤခရီးစဉ်လေးသည် အောင်မြင် ပီတီဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသော ခရီလေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ ကျေးရွာငယ်လေးများမှ ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေးကို ထောက်ပံ့မှုပေးသော လုပ်ငန်းသည် ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချို့တဲ့၍ ပညာမသင်နိုင်၊ စာအုပ်စာရေးကိရိယာ မပြည့်စုံ၍ ပညာမသင်နိုင်စသည့် အဖြစ်များကို မလိုလားပါ။ ထို့ကြောင့် တက်နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမှီရာ ဒေသများအား ယခုကဲ့သို့ သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးဝေချင်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ပေးဝေနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါသည်။ စေတနာရှင်၊အလှူရှင်များကိုလည်းများစွာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စေတနာရှင်များ၏ အလှူငွေများမရှိလျှင်လည်း ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ယခုသွားရောက်လှူဒါန်းသော မအူပင်ခရိုင် အဂါးအုပ်စုရှိ ကျေးရွာစုစုပေါင်း ငါးရွာမှ လေးရွာအား ပေးလှူပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်စု အတွက် ရွာတစ်ရွာကျန်နေပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုရွာအား လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ တွင်သွားရောက် ပေးအပ်လှူဒါန်းမည်ဟု့ မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ (၁၅၀)ခန့်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသော စေတနာရှင်များ ကျွန်တော်နှင့် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ မည်ကဲ့သို့လှူဒါန်းချင်သည်ကိုပါ ပြောပြနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရမည့်အီးမေးလ်လိပ်စာက mmaung07@gmail.com ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်ပါနိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ မိမိတို့တက်နိုင်သလောက် ပညာရေးထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ပြုကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 1:52 AM